कोरोनाको दोस्रो लहर कहिले सकिन्छ? :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
कोरोनाको दोस्रो लहर कहिले सकिन्छ? विज्ञ भन्छन्- कोरोना संक्रमण कम गर्ने एक मात्र विकल्प खोप नै हो
कमला गुरुङ बुधबार, असार २, २०७८, ०६:३३:००
काठमाडौं - नेपालमा वैशाखबाट बढ्न थालेको कोरोना संक्रमण दर हाल घट्दो क्रममा छ। जेठ दोस्रो सातादेखि कोरोना संक्रमण र मृत्युदर विस्तारै घट्न थालेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ।
गत २४ घण्टामा २ हजार ७ सय ४५ जना संक्रमित भेटिएका छन्। ४१ जनाको मृत्यु भएको छ। करिब एक सातादेखि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि एक सय तल झरेको छ। कुनै बेला एकै दिन ९ हजार माथि पुगेको संक्रमितको संख्या हाल तीन हजार मुनि छ।
सरुवा रोग विशेषज्ञ डा शेरबहादुर पुन कोरोनाको संक्रमण दर घट्दै गएपनि जोखिम उत्तिकै रहेको बताउँछन्। संक्रमण दर आगामी दिनमा पनि घट्दै जाने उनले बताए। यद्यपि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड र खोप सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो रहेको कुरामा उनी जोड दिन्छन्।
‘कोरोनाको जोखिम अहिले पनि उत्तिकै छ’ उनले भने, ‘जोखिम भएपनि हाल संक्रमण दर अलि कम हुँदै गएको छ। आगामी दिनमा पनि यो संख्या घट्दै जान्छ। तर ढुक्क भएर हिँड्न मिल्दैन।’
जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाईका साथ अहिले पनि धेरैले लागू गरेका छैनन्। खोप पनि सबै समूहले पाइसकेको छैन। यही दुई कारण कोरोनाको जोखिम सधैं रहने डा पुनको भनाई छ। उनले अहिलेको अवस्था हेरेको भरमा दोस्रो लहर आजको भोली नै सकिन्छ भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए। सबै जनाको पहुँचमा खोप पुगे मात्र कोरोनाको तेस्रो लहर आएपनि यसबाट हुने क्षति कम गर्न सकिने उनी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘आगामी दिनमा जटिल परिस्थिति आउन नदिन सबैले खोप लगाउनुपर्छ। र त्यो खोप लगाउँदासम्म हामी सबैले सजगता अपनायौँ भने तेस्रो लहर आएपनि दोस्रो लहरको जस्तो समस्या नआउला की भन्ने बुझाई हो।’
तर जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नहुने, खोप पनि सबैले नलगाउने हो भने तेस्रो लहर आए धान्न मुश्किल हुने उनी बताउँछन्।
सरकारले असार १ देखि केही प्रावधानहरु खुकुलो बनाएको छ। निषेधाज्ञाले चेन ब्रेक भएका कारण कोरोनाको संक्रमण दर कम हुन थालेको विज्ञहरुको भनाई छ। तर मानिसहरुको चहलपहल बढ्न थाले पुनः कोरोना भाइरस फैलने जोखिम हुन्छ।
डा पुनका अनुसार भाइरस धेरै फैलिएर म्युटेशन हुने संभावना धेरै हुन्छ। म्युटेशन भएपछि भाइरसको नयाँ स्वरुपहरु देखा पर्न थाल्छ। जुन कतिको संक्रामक या जटिल खालको हुन्छ सहजै अनुमान लगाउन नसकिने उनी बताउँछन्।
अमेरिका लगायत विभिन्न देशमा कडा खालको संक्रमण भएर अस्पताल भर्ना हुनेमध्ये अधिकांश खोप नलगाएका व्यक्तिहरु रहेको पाइएको उनी सुनाउँछन्।
कोरोनाको जोखिम कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने अहिले नै भन्न नसकिने बताउँदै उनले भने, ‘कुनै रोग यसरी उतारचढाव भइरहेको थाहा पाएको यो नै पहिलो हो। स्वाइन फ्लु पनि विश्वव्यापी रुपमै भएपनि एक पटक आएपछि उतारचढाव भएन। तर यो कोरोना भाइरस किन यसरी उतारचढाव भइरहेको छ भन्ने थाहा छैन। अहिले नै अनुमान लगाउनु हतार मात्र हुन्छ।’
कोरोना भाइरसले आफ्नो स्वरुप परिवर्तन गरिरहेकाले यो कहिलेसम्म रहन सक्छ भन्ने कुरा अनुमान लगाउन नसकिने उनले बताए। तर सबैलाई खोपको पहुँचमा ल्याउन सके कोरोनालाई फैलनबाट भने रोक्न सकिने उनले बताए।
उनका अनुसार सबैले खोप लगाएर भाइरस फैलनबाट रोकिन्छ। भाइरसको फैलावटलाई रोक्न सके म्युटेशन कम हुन्छ र म्युटेशन कम भएपछि मात्र भाइरसको नयाँ भेरियन्ट देखिने संभावना पनि कम हुन्छ। यो तरिकाले मात्र कोरोना विरुद्धको लडाई जित्न सकिने उनी बताउँछन्। डा पुन खोप नै कोरोनालाई जित्न सकिने एक मात्र विकल्प भएको बताउँछन्। कोरोनाको बिरामीलाई गरिने उपचार पद्धतिको पनि समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा कृष्णप्रसाद पौडेल देशभर संक्रमणको अवस्था एउटै नरहेको बताउँछन्। हाल कोरोना परीक्षण गराउन जाने र संक्रमित दुवैको संख्यामा कमी आएको उनले बताए।
संक्रमणको जोखिम हालपनि उस्तै रहेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘कुनै बेला परीक्षण गर्दा ५२ प्रतिशतमा पुगेको संक्रमण दर हाल १९/२० प्रतिशतमा देखिने गरेको छ। त्यो हिसाबले घट्दो क्रम चाँही छ। तर जोखिम भने घटेको छैन।’
निर्देशक पौडेलका अनुसार जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाईका साथ पलना गरे, आवागमनलाई रोक्न सके संक्रमण केही कम हुने देखिन्छ। तर अहिले नै जोखिम घट्यो भन्दै लकडाउन खोल्न सकिने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन्।
अहिले नै लडकाउन खोल्न नहुने पक्षहरुमा आफुहरु रहेको उनले जानकारी दिए। लकडाउन खुकुलो गर्दा केही राहत हुने भएपनि जोखिम झनै बढेर जान्छ। संक्रमणको अवस्था हेरेर लकडाउन कुन कुन क्षेत्र, कुन मोडालिटीमा खोल्न सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको उनले बताए।
उनले भने, ‘लकडाउन खोल्ने हकमा संक्रमणको अवस्था हेरेर के के खोल्ने, मन्दिर, विद्यालय, रेष्टुरेण्टको हकमा के गर्ने ? कहिले खोल्ने ? भन्ने विषयमा छलफल हुँदैछ। त्यसमा हामीले संक्रमणको दर, सक्रिय संक्रमितको संख्या, अस्पतालहरुको शय्याको अवस्था हेरेर अगाडी कसरी जाने भनेर निर्णय गर्छौ।’
नेपालमा हाल संक्रमणको दर घट्दो क्रममा रहेको बताउँदै उनले संक्रमण कम हुन अझै डेढ/दुई महिना लाग्ने जानकारी दिए। उनका अनुसार संक्रमितको संख्या एक सय तल झर्न अझै करिब दुई महिना लाग्छ। यद्यपि यो बीचको समयमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कतिको पालना हुन्छ भन्नेमा भर पर्ने उनी बताउँछन्।
पछिल्लो १६ दिन यता संक्रमित र मृतकको संख्या यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
जेठ १७ – ४७६२ संक्रमित, ११४ जनाको मृत्यु
जेठ १८ – ६०८५ संक्रमित, ६८ जनाको मृत्यु
जेठ १९ – ५३१६ संक्रमित, १०१ जनाको मृत्यु
जेठ २० – ६८२५ संक्रमित, ७५ जनाको मृत्यु
जेठ २१ – ६६५३ संक्रमित, १०१ जनाको मृत्यु
जेठ २२ – ५०४२ संक्रमित, ६८ जनाको मृत्यु
जेठ २३ – ३४७९ संक्रमित, ९९ जनाको मृत्यु
जेठ २४ – ४४७२ संक्रमित, ९२ जनाको मृत्यु
जेठ २५ – ५१५३ संक्रमित, १०८ जनाको मृत्यु
जेठ २६ – ४३४४ संक्रमित, ८१ जनाको मृत्यु
जेठ २७ – ३७४९ संक्रमित, ५९ जनाको मृत्यु
जेठ २८ – ३७५० संक्रमित, ६७ जनाको मृत्यु
जेठ २९ – ३३८४ संक्रमित, ६१ जनाको मृत्यु
जेठ ३० – २४०७ संक्रमित, ४६ जनाको मृत्यु
जेठ ३१ – २९१८ संक्रमित, ५३ जनाको मृत्यु
असार १ - २७४५ संक्रमित, ४१ जनाको मृत्यु